मुटु जुन मसँग छु, वसन्त उपन्यास पुरस्कार २०२० | वर्तमान साहित्य
म बसेको मुटु स्पेनी जोसे मारिया पेरेजले लेखेको ऐतिहासिक उपन्यास हो, जसलाई पेरिडिस भनेर चिनिन्छ। यो २०२० मा प्रकाशित भएको थियो र १ 2020 1936 को समस्याग्रस्त स्पेनमा सेट गरिएको हो। शुरूदेखि नै यस पुस्तकलाई पाठकहरू र साहित्यिक आलोचकहरूले उत्कृष्ट स्वीकृति दिए। यसको रिलीजको उही वर्षमा, यसलाई प्राइमेवर डे नोभेला पुरस्कार प्रदान गरियो।
लेखक पुस्तकको अग्रभाग मा व्यक्त गर्दछ कि उनले एक अपरिचितसँग रेलमा गरेको कुराकानीबाट प्रेरित भएको थियो, जो परदेशी रुबिया जनसंख्याको एक पुरानो डाक्टरको वंश थियो। उनले उनलाई उनका आफन्तहरू र केही छिमेकीहरूबाट धेरै किस्सेहरू भने। यस कथाको प्रत्येक लाइन कथनहरू र केही चरित्रहरूको साथ पूरक वास्तविक चरित्रको साथ, बोलेको समर्थन गर्दछ।
1 मुटुको साथ बाँच्न (२०२०)
1.2 मिरन्डा परिवार
2.1 आर्किटेक्टको रूपमा प्रदर्शन
2.2 अन्य व्यावसायिक रोजगार
मुटु जुन मसँग छ (2020)
यो एक ऐतिहासिक उपन्यास हो Paredes रुबिया को समुदाय मा सेट, ठीक स्पेनिश गृहयुद्धको सुरूमा। पुस्तक छ संगठित en पचास छोटो अध्याय, कुन तिनीहरूले सुरु गर्छन् en जुन को 1936 y अन्तमा अक्टुबर 1941। यस कथानकमा विभिन्न पात्रहरू सामेल छन्, जसले सशस्त्र द्वन्द्वको पछाडि विभिन्न कठिनाइहरूको सामना गर्दछन्।
पुस्तक युद्ध प्रगति गर्दा उनीहरू कसरी गाह्रो वर्ष बाँचिरहेका छन् भनेर देखाउँदछ र यो टु ,्गिन्छ, तर आशा बिना नै सबै कुरा सुधार हुनेछ। सबै कुरा वास्तवमै घाइते स्पेनमा हुन्छ, तर कडा मान्छे संग, जो उनको उद्धार गर्न लड्न हुनेछ, प्रेम, परिवार र एक राम्रो भविष्य को लागि इच्छा को आधार मा।
मुटुको साथ म बस्न: ...
होनोरियो बीटो विधवा छ र आफ्ना तीन छोरीहरू: क्यारिडाड, एस्पेरेंजा र फेलिसिडाडसँग बस्दछन्। उनी प्रसिद्ध डाक्टर हुन् जसले क्युबिलस डेल मोन्टेमा क्लिनिक चलाउँछन् र युद्ध हुनु अघि उनले स्पेनिश फालान्जको प्रमुखको रूपमा सेवा गरेका थिए। एक पटक द्वन्द्व सुरु भयो, तिनीहरू तिनीहरू शहर छोडेर जाने निर्णय गर्छन् सम्भावित प्रतिकारहरू जोगिनको लागि।
कथाको मुख्य पात्रहरू मध्ये एक एस्पेरान्जा हो। उनी राजनैतिक कार्यकर्ता हुन् जसले फलान्जेको फेमिनाइन सेक्सनसँग सम्बन्धित छ र हेरचाह गर्ने महिला। आफ्नो आदर्शहरूको रक्षाको अतिरिक्त उहाँ आफ्ना रिपब्लिकन मित्रहरूलाई पनि मद्दत गर्नुहुन्छ, जसमध्ये धेरैलाई मृत्युदण्ड सुनाईएको छ। उनको जीवनले पाएको बदलावको बाबजुद पनि, उनी आफ्नै बारेमा सोच्नु भन्दा पहिले अरुको हितलाई प्राथमिकता दिन्छिन।
आर्काडिया मिरांडा एक डाक्टर र रिपब्लिकन होदुई छोरा, गब्रिएल र लुकास, र जोविटा नाम गरेकी छोरी, जो सहरमा शिक्षकको रूपमा कार्यरत एक विधवा,। तपाईंको परिवार सशस्त्र द्वन्द्वबाट धेरै प्रभावित हुनेछ, आफ्नै बिरामी र परिचितहरूबाट पनि धम्की दिइन्छ। सबैलाई तिनीहरूको जागिरबाट हटाइनेछ कि अराजकताको नतीजा अनुभव गर्न।
गब्रिएल उहाँ एक त्रुटिपूर्ण क्यारियरको साथ एक युवा डाक्टर हुनुहुन्छ र सिटी काउन्सिल काउन्सिलर उसले लुक्नु पर्छ किनभने ऊ विपक्षी पक्षको हो, यद्यपि ऊ अन्तमा लक हुनेछ। यसको अंशको लागि, लुकास, जो आफ्नो भाइको भयानक वास्तविकता बीचमा छ, अप भनिन्छ, एक अवस्था जुन उसले आफ्नो जीवन बचाउनको लागि एक विकल्पको रूपमा देख्दछ, किनकि उसको पेशाको लागि उनीसँग सुविधाहरू छन्।
यस कथामा दुई परिवारहरू समावेश छन्, ती डा। होनोरियो बिटोको - क्रिश्चियन र फलाng्गीस्टे र रिपब्लिकन डा। अर्काडिया मिरांडा। दुबै मेडिकल एकेडेमीमा अध्ययनबाट एक अर्कालाई चिनेका थिए, यद्यपि उनीहरूसँग सधै फरक राजनीतिक झुकाव थियो। तिनीहरू र तिनीहरूका परिवारहरू तीर्थयात्राको पूर्वतिरका दिनहरू उनीहरू खुशी थिए, वर्जिन डेल कार्मेन को दिन को लागी वार्षिक मा आयोजित।
यस उत्सवको बीचमा, सबै व्यक्तिले खाना र नृत्य साझा गरे, तिनीहरू जुन राजनीतिक पक्षमा थिए त्यसमा कुनै भेदभाव नगरी। यो त्यहाँ छ धेरै वर्ष पछि- एस्पेराना बिटो र लुकास मिरांडा भेट, मैले फेला पारे कि यसले मित्रता भन्दा बढी ल्याउँदछ। यो एक दुई दिन मा एक डरलाग्दो युद्ध हुनेछ भनेर कल्पना नगरी, जसले सबै कुरा परिवर्तन गर्दछ।
सरकारका विपक्षीहरू नवजागरणबाट अग्रस्थानमा रहन र आवाज निस्के। सत्ता पाएपछि तिनीहरूले बाहिर जाने सरकारका सदस्यहरूलाई सताउन थाले। La नयाँ वास्तविकताले परिणामको रूपमा भयानक राजनीतिक र सैनिक अराजकता ल्यायो, जसले यसको मार्गमा सबै मेटायो।
यो सबै जटिल अवस्थाले मानहरूमा मानहरू देखा पर्‍यो; बहादुरी, नम्रता, एकता र मानवता तिनीहरूले ठूलो फल फलाए। राजनीतिक विभाजन बाहिर।
पेरिडिस् भनेर चिनिने जोसे मारिया पेरेज अर्चिटेक्ट र लेखक आइतबार सेप्टेम्बर २ 28, १ 1941 3१ मा काबेजान डे लिबाना नगरपालिका (क्यान्टाब्रिया) मा संसारमा आए। जब म years बर्षको थिएँ, उसको परिवार पालेन्सिया सरे, विशेष गरी अगुइलर डे क्याम्पू शहरमा, हाई स्कूल पूरा नगरेसम्म उहाँ बस्नुभयो।
वर्षौ पछि, उनी आफ्नो विश्वविद्यालयको अध्ययन गर्न म्याड्रिड सरे र १ 1969 XNUMX in मा उनले आर्किटेक्टको रूपमा स्नातक गरे। उनले स्पेनी कलात्मक सम्पदाको संरक्षण, संरक्षण र बचावमा उनको रुचिबाट प्रेरित भएर यो पेशा रोजे।
आर्किटेक्टको रूपमा प्रदर्शन
आफ्नो स्नातक पछि, उसले केहि मन्दिर, थिएटर, भवन, महल, पुस्तकालय र सांस्कृतिक घरहरूको पुनर्निर्माणमा काम गरिसक्यो। 40 वर्ष को लागी (1977 - 2017) उनले निर्देशन गरे पालेन्सियामा ऐतिहासिक विरासतको लागि सान्ता मारिया ला रियल फाउन्डेशन, जसले उसलाई धेरै महत्वपूर्ण पुनर्वासहरूमा उपस्थित हुन अनुमति दियो, जस्तै:
ओबेडामा फ्रान्सिस्को डे लॉस कोबोस प्यालेस
Aguilar de Campoo मा सान्ता मारिया ला रियलको मठ
"वास्को डे क्विरोगा" म्याड्रिडको कम्पुलेटन्स युनिभर्सिटीमा आवास हल
अन्य व्यावसायिक रोजगार
पेरिडिस एक हास्यपूर्ण कार्टुनिस्टको रूपमा उनको कार्यको लागि व्यापक मान्यता प्राप्त छ, सत्तरीको दशकमा शुरू भएको काम। उनले पहिलो कार्टुनहरू त्यतिबेलाका राजनीतिज्ञहरूमाथि आधारित बनाए जुन उनले पत्रिकामा प्रकाशित गरे साइरियो एसपी
१ 1976 XNUMX Since देखि मितिमा, पेरेज अखबारमा हास्य स्ट्रिपहरू प्रकाशित गर्दछ देश। यस फलदायी कामको, लेखक धेरै संकलन गरेको छ, र नतिजाको रूपमा, उसका उत्कृष्ट चित्रणको साथ books पुस्तकहरू प्रकाशित भएका छन्, हाइलाइट गर्दै: पेरिडिस १.२.।। परिवर्तन नभएसम्म years बर्ष (1977) र विश्वास र कुनै बन्धन (1996). उनले दुई उत्पादन पनि गरेका छन् कार्टून का लागि कार्टुन TVE।
2002 बाट 2007 बाट टिभी श्रृंखला प्रस्तुत रोमान्सकको लागि कुञ्जीहरू en TVE. यस वृत्तचित्रमा तीन सत्रहरू थिए जहाँ विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकहरूको आधा घण्टा यात्रा दिइएको थियो। यो काम पछि, पेरिडिस पनि चलाए उस्तै टेलिभिजन च्यानलमा दुई अन्य कार्यक्रमहरू, जस्तै: पहाडहरू सार्नुहोस् y क्याथेड्रलहरूको प्रकाश र रहस्य.
उनले साहित्यिक क्षेत्रमा १ 1977। Field मा आफ्ना प्रकाशनहरू सुरू गरे, यद्यपि यो २०१ 2014 मा थियो जब उनले आफ्नो पहिलो उपन्यास प्रस्तुत गरे: राजाको लागि पर्खँदै. दुई वर्ष पछि, उहाँ यहाँ फर्कनुभयो: रानी एलेनोरको श्राप, एक कथा जुन अघिल्लो कथा जारी छ। त्यस पछि उनले other अन्य पुस्तकहरू लेखेका छन्: विनाश पनि एक आशा हुन सक्छ (2017), एक राज्य बिना रानी (2018) र मुटु जुन मसँग छ (2020)।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » नोभेला » मुटु जुन मसँग छ